nnukwu ụlọ ahịa
Mgbe ị na-ahọrọ shelves ụlọ ahịa, buru ụzọ tụlee nsogbu nke ibu ibu. Adịla họrọ shelf nwere otu ibu. Họrọ shelves dị larịị. Mgbe ịzụrụ, họrọ ogologo laminate kwesịrị ekwesị dịka mkpa mkpa si dị, na ụdị ya, agba a ...
Kedụ ihe na -ebute ihu ekwe ekwe?
Selọ bụ ngwa nchekwa dị mkpa n'ụlọ nkwakọba ihe, ihe owuwu ahụ dị mfe, dị mfe ịtọsa na ịwụnye, nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -amasị ya, mana shelves na -egosi na -ehulata nrụrụ abụghị ihe ọhụrụ, n'ikpeazụ gịnị kpatara ya? Sọl na -ekwe nrụrụ ka esi eme? 1.The ...
Site na mmepe teknụzụ na -aga n'ihu, usoro nchekwa ebe nchekwa, dị ka ọkụ, ọkara na akwa dị arọ, na akwa ime ụlọ na ọgbọ ọhụrụ nke racks, bụ nke mejupụtara ngwakọta jikọtara ọnụ. Ngwakọta agwakọtara nke racks nchekwa na -elebawanye anya. Fre ...
Yuanda Shelves gbara mbọ ichebe gburugburu ebe obibi na mmepụta enweghị mmetọ.
site na nchịkwa na 21-05-26
Industrylọ ọrụ nchekwa shelf ọdịnala, ọkachasị akụkụ nke nchekwa nchekwa, na -ekwukarị, akụrụngwa ya bụ nchara. Mgbe ị tụgharịrị, ịgbado ọkụ, ịtụtụkọta, phosphating, na fesaa ya, ha ga -emecha bụrụ ihe mejupụtara shelf, ma mgbe mgbakọ gachara, ha ga -abụ shelves emechara. . M ...
Ihe nchekwa nchekwa ụdị Suzhou na-eji ohere ụlọ nkwakọba ihe dị elu
site na nchịkwa na 21-03-18
A na-achịkọta usoro niile nke akwa nchekwa nke ime ụlọ elu, ọ dịghị mkpa ịgbado ọkụ na saịtị, yana ọmarịcha na mmesapụ aka. Tụnyere ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ ihe nchara akụkụ, n'ihi na shelf ala ala n'onwe ya na -arụ ọrụ nkwado nke ...
Inweta atụmatụ nchekwa nchekwa Suzhou chọrọ isonye na ma ndị na -achọ ihe na ndị na -achọ ihe
Nweta atụmatụ imewe akwa nchekwa Suzhou chọrọ ntinye aka nke ndị na -ebubata ya na ndị chọrọ ya. Site na ịrị elu na -arịwanye elu maka akwa nchekwa taa, akwa nchekwa ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ ebe nchekwa dị mkpa n'ụlọ nkwakọba ihe. Shelf nchekwa bụ s ...
Ụzọ mmepe netwọkụ nke Suzhou shelf, ụlọ ọrụ ọdịnala
Enweghị obi abụọ ọ bụla maka ịdị mma nke ịntanetị maka ndị mmadụ. Ndị mmadụ na-ejikarị “Internetntanetị nke kacha ike niile” kọwaa ịdị mma na ihe niile gbasara afọ ịntanetị. Enweghị ngwaahịa dị na ịntanetị ị nweghị ike ịzụta, naanị ị nweghị ike iche maka ya, site na ...